Sawirada” Xaflad soo dhaweyn ah oo Jigjiga loogu sameeyay Madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st May 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya , waxaa xalay xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay Madaxweynayaasha Maamulka Galmudug iyo Jubbaland Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Axmed Madoobe.
Xaflada soo dhaweynta waxaa kasoo qeyb galay soona agaasimay Madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar , waxaana munaasabada sidoo kale goob joog ka ahaa Madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar, oo ka hadlay Munaasabada soo dhaweynta ayaa sheegay in muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee kuwada dhaqan Xuduuda .
Cabdikariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha Galmudug oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii loo nabadeyn lahaa dadka kuwada dhaqan Xuduudaha Soomaaliya iyo Itoobiya uuna Jigjiga u yimid xal u helida colaadihii dhawaan xadka ka dhacay.
Dhinaca kale maanta ayaa lagu wadaa in Kulan looga hadlayo colaadihii ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay Wada yeeshaan Madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo Madaxweynaha Galmudug,
R/wasaare Cumar “Soomaaliyada cusub waxay u baahan tahay xoog iyo xirfad shaqo oo dabooli karta baahida shaqaale ee dalka”